Emumva ukusebenzisa, ikakhulukazi leyo ahambisana uthwala izinto ezisindayo, kuyimfuneko zemvelo. Imisipha ayibi phakathi amakilasi, ikhula ezikhuphuka ngemva kwazo. Ithuba kwemisipha ukukhula iqala kusuka ngesikhathi uma ushiya ejimini. Uma kusukela ngasinye ukuqeqeshwa Ngifuna uthole inzuzo esiphezulu, udinga ukwazi ukuthi nokuphumula alulame.
Ukuqeqeshwa - okungukuthi esicindezelayo sokuba imisipha
Uma phakamisa into esindayo, imisipha zinenkinga yokucindezeleka okukhulu. Ngemva bahla- Amazing kwemisipha ubuhlungu uzikhumbuze izinsuku ezimbalwa. Yokutakula emva ukuqeqeshwa kumelwe nakanjani babe qualitative. Uma ngaso sonke isikhathi ukuletha umzimba wakho ukukhathala ejimini, umonakalo aqoqana ngokuhamba kwesikhathi, futhi umzimba uyobuyisela amandla, esikhundleni sokwakha kwemisipha entsha. Bathi, udinga ukunikeza 100%, konke kulungile, kodwa uma wenza ngisho nephesenti elilodwa, kunokuba ngcono imiphumela nezinyathelo phambili, ungakwazi ukubuyela emuva izinyathelo ezimbili emuva.
Ukudla emumva ukusebenzisa
Ukudla zidliwa ngemva kokuzivivinya futhi usuku lonke, ngokuyinhloko nomthelela izinga yokutakula. Ukudla ngaphambi umsebenzi nakho kufeza indima ebalulekile kule nqubo. Ukugaya - inqubo eside, ugxile ngaphambi kulayishwa amaprotheni kanye carbohydrate ngeke aluka emzimbeni isikhathi eside. Ngenxa yalesi sizathu, wena isidingo ngokucophelela ukukhetha imikhiqizo. Ikakhulukazi ngaphambi Amazing okukhulu, kudingeka abe eliphezulu kakhulu izinga amaprotheni kanye nabathile carbohydrate eziyinkimbinkimbi cishe amahora amabili ngaphambi ikilasi ukugwema ukuqunjelwa.
Awukwazi ukunganakwa ngilulekela
Sheshisa emumva umsebenzi kusiza elula, ukubaluleka okuhlale phansi. Imisipha ukukhula akunakwenzeka ngokungabi bikho eguquguqukayo kanye kuyaqina. Ngemva Amazing, udinga ukwaba okungenani imizuzu engu-20 kudambe welulele. Welulekela - kungcono indlela omkhulu ukuze akhulule imisipha ukungezwani futhi engase banciphise ubuhlungu ukuthi kuzozwakala kamuva. A elula eside kanye nokuvivinya umzimba ngendlela kanye nokudla ngendlela efanele kuyokusiza ukuba sinciphise cholesterol kanye ngcono kwegazi imisipha. Ukwazi lezi zinto, kudingeka ufunde indlela ukuthatha lesi sici esibalulekile nakakhulu.
Perfect Post-Workout Amaphrotheni
Ngemva Amazing, amaprotheni esibalulekile. Kuye isisindo udinga ukuyisebenzisa kusuka 20 kuya 50 amagremu. Uzokugcwalisa imisipha izincwadi ezidingekayo ekukhuleni kanye ngcono. Ngemva Amazing, amaprotheni kubalulekile, ikakhulukazi uma usudlile lutho amahora ambalwa. Iningi labesifazane bantule 20g, kuyilapho amadoda kufanele sihlose phezulu ububanzi. amaprotheni whey ingenye ethandwa kakhulu amaprotheni amaphilisi, okuyinto oyenza isebenze yokutakula imisipha ngemva kokuzivivinya.
Ukudla okune-potassium, ukusiza ekuvuseleleni izindawo kwemisipha
yokutakula Accelerated ngemva kokuzivivinya ingatholakala zokuhlanganisa umthombo potassium ekudleni post-Amazing. potassium lakho izinqolobane kuthiwa nakanjani mpilo umzimba okukhulu. Potassium (phakathi kwezinye izakhi mkhondo ezifana sodium ne-calcium) iyona amaminerali ezinkulu odlala indima ebalulekile ukuthuthukiswa amandla kwemisipha. Umthombo ezinhle potassium zihlanganisa, isibonelo, ubhanana.
Gxila izinga ubuthongo
Good izinga ubuthongo futhi umzimba kudingeka singagcini nje sokuzilibazisa. Kubalulekile isikhathi kuthatha ukuba alulame. Anikele amahora eliyigugu ubuthongo ngoba isikhathi eside kungaholela ezinkingeni kwezempilo kanye ngokwengqondo, kanye nomthelela ongemuhle isimo somzimba. I enhle kubhekwa kakhulu ukuba ngiyibambe ubuthongo eziyisikhombisa emahoreni ayisishiyagalolunye. Kufanele sithole izindlela zokwenza izinguquko umbuso kosuku, okunikela ithuba ukusheshe ulale. Ungakwazi, isibonelo, setha umkhawulo wesikhathi ku-TV yakho noma sebenzisa okuthiwa "ubuchwepheshe blackout", owawuthi, akunakwenzeka ukuba athinte noma iyiphi uhlobo amasu, emva kwesikhathi esithize, ezifana emva 9 pm. imisipha Isikhathi emumva umsebenzi kuncike izinga lokuphumula ukuthi anganikeza imodi efanele usuku ubuthongo umnyuziki umsindo.
Izinsuku kuyiphefu, ukunikeza imisipha yakho ukuphumula kahle sifaneleka. Kodwa-ke kuyoba okungalungile usuku lonke elele phezu kombhede futhi sithole amandla ukusebenzisa emumva umsebenzi. isikhathi yokutakula Kuzoncishiswa izikhathi eziningi uma ukuphumula asebenzayo. Kungaba kuphela uma beya ezitolo, ngebhayisikili, ukudlala izingane, bahlanze indlu futhi dancing nokunye. Okudambisa ubuhlungu usizo, Isimanga siwukuthi, bonisani esisindo noma cardio ukukhanya.
Ubunzima imisipha ngesikhathi umsebenzi - yinto enhle, ngoba kukhona ukukhuthazwa ukukhula izinga ephakeme, amaseli abuyiselwe. Ngokuphathelene ukucindezeleka ngomqondo zalo eziyisisekelo, ezingamahlalakhona esiteji yokuntuleka njalo sokulala, ezinkingeni ababhekene nazo emsebenzini kanye nezinye izinto ezibangela ke, ungaba nomthelela obonakalayo emumva ukusebenzisa. Nanoma yiluphi uhlobo ukucindezeleka ekuphileni kwakho kuyowuthonya empilweni jikelele, ngakho-ke kubalulekile ukuba athathe izinyathelo ukunciphisa izinga ukungezwani, ukwenza okuthile ngempela ke, bophezela ukuhleka futhi zizungeze nabantu obathandayo.
ukwelashwa Umculo nezinye izinto ewusizo
Yokutakula okungukuthi obalulekile yinoma yimuphi ukuqina hlelo futhi ebalulekile ingxenye enempilo yokuphila. Relaxing umculo kungaba usizo olukhulu kule yokutakula, noma okungenani ezicezile ubuhlungu bemisipha. Tempo kancane ingoma kungasiza ngokushesha aphansi blood pressure ugaye izinga ngemva kokuzivivinya.
Ukugcina ibhalansi amanzi. Ukuphelelwa amanzi emzimbeni kungabangela umonakalo owengeziwe kwemisipha kunciphise amandla omzimba lokuzelapha. Ukuze ugweme lokhu, kwanele ukuba aphuze isilinganiso esanele yamanzi abavamile ukuphuza nsuku zonke.
Uhlikihla ukukusiza. Kuyasiza ukuba ngivule isibanda izicubu nokwehlisa ukuqina elihlobene ne kwemisipha yokutakula. amakhandlela olunephunga elimnandi kanye melody okuphumuzayo kuyinto efiselekayo, kodwa akudingekile.
Zama ingubo kokucindezelwa. Ukuze abasubathi abaningi kubalulekile ngokushesha nibuyise amandla. ucwaningo lwamuva nje lubonisa ukuthi ugqoke kokucindezelwa zangaphansi kungasiza ukunciphisa isikhathi esidingekayo ukuze imisipha yokutakula phakathi ukusebenzisa okukhulu.
Geza ngamanzi abandayo noma douche. Nakuba kuzwakala kancane esabise abanye, abe ukucwiliswa egcwele umzimba ngemva kokuzivivinya ngamanzi abandayo kungaba kakhulu ukunciphisa ubuhlungu nokuvuvukala amahora 24 ngemva kwalokho.
Uma umgomo ozibekele wona kuhle ngombala sibalo noma izikhwepha zomfana elikhulu, kufanele lamukele iqiniso lokuthi buhlungu kancane kuyoba yenqubo ukuguqulwa. Izinsuku yokutakula futhi ukuqeqeshwa izinsuku zibaluleke ngokulinganayo. Ungagijimeli futhi azame ukwenza kungenzeki, kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani uphumule, ngokuqhosha ukuvuna izithelo zomsebenzi wabo.
Natalia Kovalyova - umsubathi, bodybuilder
Bodybuilder - ubani lo? Ukwakha umzimba. umzimba wokwakha
UStepan Likhodeev: kwebalingisi of umlingisi kule noveli "The Master noMargarita"
Ntambama izihlambi noma alube garlic sauce
Uyini photoepilator ekhaya? Izibuyekezo zedivayisi
Aleksandr ilin (Jr.). Aleksandr ilin (Jr.): Filmography. Photo. ukuphila Siqu. indima